အာလူးတဈမြိုးတညျးစားပီး ၁၁၇ ပေါငျ ကသြှားတဲ့ အမြိုးသား
HomeKnowledgeအာလူးတဈမြိုးတညျးစားပီး ၁၁၇ ပေါငျ ကသြှားတဲ့ အမြိုးသား
အာလူးနဲ့ ပတျသကျလို့ သငျမသိသေးတဲ့အခကျြမြား
ကမ်ဘာပျေါက နိုငျငံပေါငျး တဈရာကြျောမှာ အာလူးတှကေို စိုကျပြိုးကွပါတယျ။ အာလူးကို တရုတျ၊ အမရေိကနျ၊ အိန်ဒိယ၊ ရုရှားနဲ့ ယူကရိနျးနိုငျငံမှာ အမြားဆုံး စိုကျပြိုးကွ ပါတယျ။ အာလူးက ကနျြးမာရေးအတှကျ အလှနျသငျ့တျောကွောငျးကို လူအမြားစုက မယုံကွညျကွပါဘူး။ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အန်တရာယျ ရှိတယျလို့ပဲ ထငျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အာလူးကွျောဆိုရငျ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျနိုငျပါတယျ။
အာလူးကို တောငျအမရေိကမှာ စတငျစိုကျပြိုးတာဖွဈပွီး တောငျအမရေိကမှာ အခြို့အာလူးရိုငျးတှကေိုလညျး တှနေို့ငျပါတယျ။ အာလူးကို BC 8000 နဲ့ 5000 ကွားမှာ ဘိုလီဗီးယားနိုငျငံက စတငျ အသုံးပွုခဲ့တာဖွဈပွီး ယနခေ့တျေမှာတော့ အာလူးကို တဈကမ်ဘာလုံးက စားနကွေပါပွီ။
2. အာလူးကို နတေို့ငျးစား လို့လညျး စိုးရိမျစရာ မရှိပါဘူး
- အာလူးအခှံမှာ ပိုတကျဆီယမျဓာတျ ကွှယျဝလို့ နှလုံးကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးပါတယျ။ အာလူးမှာ ဖော့ဈဖောရပျ၊ မဂ်ဂနီဆီယမျ၊ ကယျလျဆီယမျ၊ ဆိုဒီယမျ၊ သံဓာတျနဲ့ ဇငျ့ဓာတျတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ
- အာလူးမှာ ဗီတာမငျ C လညျး မြားမြား ပါဝငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အာလူးကို အပူပေးတဲ့ အခါ ဗီတာမငျ C တှေ လြော့သှားပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အာလူးကို ခကျြစားတာ၊ အခှံမခှာဘဲ စားတာ ပိုပွီး အကြိုးရှိပါတယျ။
- အာလူးမှာ အမြှငျဓာတျလညျး ပါဝငျတာကွောငျ့ အူကနျြးမာရေး ကိုလညျး အကြိုးပွုပါတယျ။
- အာလူးမှာ ကိုလကျစထရော အမြားကွီး မပါဝငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အာလူးကို ဆီနဲ့ကွျောတဲ့ အခါ ကိုလကျစထရောတှေ ပါလာမှာပါ။
- အာလူးက အရပွေား ကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးစပွေီး စိတျဓာတျကတြာ၊ စိတျဖိစီးမှု မြားတာကိုလညျး လြော့စပေါတယျ။
- အာလူးကို ပွုတျစားတဲ့ အခါ ဗိုကျပွညျ့တယျလို့ ခံစားရစပေါတယျ။ အာလူးပွုတျစားရငျ ကိုယျအလေးခြိနျလညျး မွနျမွနျလြော့ သှားမှာပါ။
3. အာလူးနဲ့ ပတျသကျလို့ သတိထားရမယျ့ အခကျြမြား
အာလူးကို ဒိနျခဲ၊ ဆီစတဲ့ အဆီပါဝငျမှုမြားတဲ့ အစာတှနေဲ့ ရောစားရငျ ကိုယျအလေးခြိနျ တကျစမှောပါ။
- ဆီးခြိုရောဂါရှိသူတှကေ အာလူးစားတာနဲ့ ပတျသကျလို့ သတိထားသငျ့ပါတယျ။ အာလူးမှာ ဂလူးကို့ဈဓာတျ မွငျ့မွငျ့မားမား ပါဝငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အာလူးက သှေးတှငျး သကွားဓာတျကို 25 ရာခိုငျနှုနျး အထိ လြော့စပေါတယျ။
- အခြို့အမြိုးသမီးတှကေ ရငျသားသေးခငျြ ကွပါတယျ။ အာလူးကို နညျးမှနျလမျးမှနျ ခကျြစားရငျ အရသာရှိတဲ့ ဟငျးဖွဈစသေလို ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျလညျး အမြားကွီး လြော့သှားမှာပါ။ ရငျသားလညျး သေးသှားမှာပါ။
- အာလူးကို မမှညျ့ခငျ မစားတာ ပိုကောငျးပါတယျ။ မမှညျ့သေးတဲ့ အာလူးမှာ solanine အဆိပျဓာတျပါဝငျပါတယျ။ မမှညျ့သေးတဲ့ အာလူးကို ခကျြစားလို့လညျး အဲဒီဓာတျက လြော့မသှားပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ မမှညျ့သေးတဲ့ အာလူးတဈလုံးတညျး စားရငျတော့ ဘာမှ မဖွဈပါဘူး။
- သငျက အာလူးကွျောကွိုကျသူ ဆိုရငျ ဒီအခကျြကို သတိထားသငျ့ပါတယျ။ အာလူးကွျောတှေ အမြားကွီး စားရငျ ကိုယျအလေးခြိနျ အမြားကွီး တကျလာမှာပါ။
4. အာလူး တဈမြိုးတညျးကိုပဲ နတေို့ငျးစားရငျ ခန်ဓာကိုယျမှာ ဘာတှေ ဖွဈလာမလဲ။
2016 ခုနှဈတုနျးက မဲလျဘုနျးမွို့က Andrew Taylorက ဒီမေးခှနျးကို ဖွခေဲ့ပါတယျ။ သူက အာလူး 13 ပေါငျကို ဝယျလာပါတယျ။ သူ့ရဲ့ပွောပွခကျြ အရ သူ့ခန်ဓာကိုယျက ကယျလိုရီ 99 ရာခိုငျနှုနျးက အာလူးက ရတာဖွဈပွီး ကနျြတဲ့ 1 ရာခိုငျနှုနျးက အသီးအရှကျ၊ ဝကျအူခြောငျး၊ ကွကျသှနျဖွူ၊ ပဲနို့စတာတှကေနေ ရတာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီနောကျ Andrew အဝလှနျလာ ပါတယျ။ ကိုယျအလေးခြိနျ ကဖြို့အတှကျ အစားအစာ တဈခုတညျးကိုပဲ စားဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျ Andrew က အသီးအရှကျတှအေကွောငျး လလေ့ာခဲ့ပွီး အာဟာရ ပညာရှငျတှေ နဲ့လညျး တိုငျပငျပါတယျ။
အဲဒီနောကျ Andrew က အာလူးတဈမြိုးတညျးကိုပဲ စားပါတော့တယျ။ ကိုလကျစထရော၊ သှေးတှငျးသကွားဓာတျ ကသြှားပွီး တခွား ကနျြးမာရေးတှလေညျး ကောငျးလာပါတယျ။ Andrew က အားကစားလညျး လုပျလို့9လ အကွာမှာ 110 ပေါငျ ကသြှားပါတယျ။ တဈနှဈတိတိ အာလူးတဈမြိုးတညျးကိုပဲ စားတဲ့အခါ 117 ပေါငျ ကသြှားပါတယျ။
အာလူးမှာ ပရိုတိနျးဓာတျ နညျးနညျးပဲ ပါဝငျပါတယျ။ ကိုယျခံအား စနဈအတှကျလညျး အာလူးက မရှိမဖွဈ လိုအပျပါတယျ။ ကွှကျသားအလေးခြိနျကိုလညျး တိုးစပေါတယျ။ အာလူးက အသားအရေ၊ ဆံပငျ၊ လကျသညျးတှေ အတှကျလညျး အကြိုးပွုပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အာလူးက ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျပါတယျ။
အာလူးတစ်မျိုးတည်းစားပီး ၁၁၇ ပေါင် ကျသွားတဲ့ အမျိုးသား
အာလူးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင်မသိသေးတဲ့အချက်များ
ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံပေါင်းတစ်ရာကျော်မှာ အာလူးတွေကို စိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ အာလူးကို တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ အိန္ဒိယ၊ ရုရှားနဲ့ ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာ အများဆုံး စိုက်ပျိုးကြ ပါတယ်။ အာလူးက ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်သင့်တော်ကြောင်းကို လူအများစုက မယုံကြည်ကြပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အန္တရာယ် ရှိတယ်လို့ပဲ ထင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာလူးကြော်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
အာလူးကို တောင်အမေရိကမှာ စတင်စိုက်ပျိုးတာဖြစ်ပြီး တောင်အမေရိကမှာ အချို့အာလူးရိုင်းတွေကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အာလူးကို BC 8000 နဲ့ 5000 ကြားမှာ ဘိုလီဗီးယားနိုင်ငံက စတင် အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယနေ့ခေတ်မှာတော့ အာလူးကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက စားနေကြပါပြီ။
2. အာလူးကို နေ့တိုင်းစား လို့လည်း စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး
- အာလူးအခွံမှာ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ် ကြွယ်ဝလို့ နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းပါတယ်။ အာလူးမှာ ဖော့စ်ဖောရပ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ဆိုဒီယမ်၊ သံဓာတ်နဲ့ ဇင့်ဓာတ်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်
- အာလူးမှာ ဗီတာမင် C လည်း များများ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာလူးကို အပူပေးတဲ့ အခါ ဗီတာမင် C တွေ လျော့သွားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အာလူးကို ချက်စားတာ၊ အခွံမခွာဘဲ စားတာ ပိုပြီး အကျိုးရှိပါတယ်။
- အာလူးမှာ အမျှင်ဓာတ်လည်း ပါဝင်တာကြောင့် အူကျန်းမာရေး ကိုလည်း အကျိုးပြုပါတယ်။
- အာလူးမှာ ကိုလက်စထရော အများကြီး မပါဝင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အာလူးကို ဆီနဲ့ကြော်တဲ့ အခါ ကိုလက်စထရောတွေ ပါလာမှာပါ။
- အာလူးက အရေပြား ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းစေပြီး စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိတ်ဖိစီးမှု များတာကိုလည်း လျော့စေပါတယ်။
- အာလူးကို ပြုတ်စားတဲ့ အခါ ဗိုက်ပြည့်တယ်လို့ ခံစားရစေပါတယ်။ အာလူးပြုတ်စားရင် ကိုယ်အလေးချိန်လည်း မြန်မြန်လျော့ သွားမှာပါ။
3. အာလူးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတိထားရမယ့် အချက်များ
အာလူးကို ဒိန်ခဲ၊ ဆီစတဲ့ အဆီပါဝင်မှုများတဲ့ အစာတွေနဲ့ ရောစားရင် ကိုယ်အလေးချိန် တက်စေမှာပါ။
- ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေက အာလူးစားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။ အာလူးမှာ ဂလူးကို့စ်ဓာတ် မြင့်မြင့်မားမား ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာလူးက သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို 25 ရာခိုင်နှုန်း အထိ လျော့စေပါတယ်။
- အချို့အမျိုးသမီးတွေက ရင်သားသေးချင် ကြပါတယ်။ အာလူးကို နည်းမှန်လမ်းမှန် ချက်စားရင် အရသာရှိတဲ့ ဟင်းဖြစ်စေသလို ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လည်း အများကြီး လျော့သွားမှာပါ။ ရင်သားလည်း သေးသွားမှာပါ။
- အာလူးကို မမှည့်ခင် မစားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ မမှည့်သေးတဲ့ အာလူးမှာ solanine အဆိပ်ဓာတ်ပါဝင်ပါတယ်။ မမှည့်သေးတဲ့ အာလူးကို ချက်စားလို့လည်း အဲဒီဓာတ်က လျော့မသွားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မမှည့်သေးတဲ့ အာလူးတစ်လုံးတည်း စားရင်တော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။
- သင်က အာလူးကြော်ကြိုက်သူ ဆိုရင် ဒီအချက်ကို သတိထားသင့်ပါတယ်။ အာလူးကြော်တွေ အများကြီး စားရင် ကိုယ်အလေးချိန် အများကြီး တက်လာမှာပါ။
4. အာလူး တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ နေ့တိုင်းစားရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ။
2016 ခုနှစ်တုန်းက မဲလ်ဘုန်းမြို့က Andrew Taylorက ဒီမေးခွန်းကို ဖြေခဲ့ပါတယ်။ သူက အာလူး 13 ပေါင်ကို ဝယ်လာပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပြောပြချက် အရ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က ကယ်လိုရီ 99 ရာခိုင်နှုန်းက အာလူးက ရတာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ 1 ရာခိုင်နှုန်းက အသီးအရွက်၊ ဝက်အူချောင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပဲနို့စတာတွေကနေ ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် Andrew အဝလွန်လာ ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဖို့အတွက် အစားအစာ တစ်ခုတည်းကိုပဲ စားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် Andrew က အသီးအရွက်တွေအကြောင်း လေ့လာခဲ့ပြီး အာဟာရ ပညာရှင်တွေ နဲ့လည်း တိုင်ပင်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် Andrew က အာလူးတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ စားပါတော့တယ်။ ကိုလက်စထရော၊ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ကျသွားပြီး တခြား ကျန်းမာရေးတွေလည်း ကောင်းလာပါတယ်။ Andrew က အားကစားလည်း လုပ်လို့9လ အကြာမှာ 110 ပေါင် ကျသွားပါတယ်။ တစ်နှစ်တိတိ အာလူးတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ စားတဲ့အခါ 117 ပေါင် ကျသွားပါတယ်။
အာလူးမှာ ပရိုတိန်းဓာတ် နည်းနည်းပဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအား စနစ်အတွက်လည်း အာလူးက မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ကြွက်သားအလေးချိန်ကိုလည်း တိုးစေပါတယ်။ အာလူးက အသားအရေ၊ ဆံပင်၊ လက်သည်းတွေ အတွက်လည်း အကျိုးပြုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အာလူးက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပါတယ်။